“Mwari Akatisikirei?” Chokwadi chemuBhaibheri Chakapedza Nyota Yangu
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bengali Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kamba Kannada Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Marathi Maya Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Chokwadi chemuBhaibheri Chakapedza Nyota Yezvandaida Kuziva
Yakataurwa naMayli Gündel
GORE ROKUBEREKWA: 1987
NHOROONDO YOUPENYU: BABA MUMUSLIM, AMAI MUJUDHA
Ndakaberekerwa muguta reBaku, kuAzerbaijan, uye ndiri wechipiri uye gotwe mumhuri yedu. Baba vangu vaiva muMuslim, uye amai vaiva muJudha. Vaidanana uye vaitsigirana pane zvavaitenda, pasinei nekuti zvainge zvakasiyana. Baba pavaitsanya mumwedzi waRamadan, Mhamha vaivatsigira, uye Mhamha pavaichengeta Paseka, Baba vaivatsigirawo. Mumba medu taiva neKoran, Torah, uyewo Bhaibheri.
Ndaizviti ndiri muMuslim. Kunyange zvazvo ndaibvuma kuti Mwari ariko, pane nyaya dzaindinetsa. Ndaizvibvunza kuti, ‘Sei Mwari akasika vanhu, uye zvinobatsirei kuti munhu atambure kweupenyu hwose, ozonopiswa nekusingaperi?’ Sezvo vanhu vaiti Mwari ndiye anoita kuti zvinhu zvose zviitike, ndaizvibvunza kuti, ‘Mwari wacho anokonzera matambudziko onakidzwa nekuona vanhu vachitambura here?’
Pandakanga ndava nemakore 12, ndakatanga kuita minamato mishanu inoitwa nevaMuslim pazuva inonzi namaz. Panenge panguva iyoyo, ini nasisi vangu takaendeswa kuchikoro chechiJudha naBaba. Ikoko takadzidziswawo mutauro wechiHebheru uye tsika dzemubhuku rinonzi Torah. Tisati tatanga kudzidza mukirasi, taitanga taita minamato yaiitwa nevaJudha. Saka, mangwanani ndichiri kumba ndaipa munamato wenamaz, kana ndasvika kuchikoro ndaibva ndabatana nevamwe paminamato yevaJudha.
Ndaida chaizvo kuziva mhinduro dzechokwadi dzemibvunzo yangu. Kuchikoro, ndaigara ndichibvunza vadzidzisi vechiJudha kuti: “Sei Mwari akasika vanhu? Mwari anoona sei Baba vangu muMuslim? Baba vangu munhu akanaka, saka sei vachinzi vakan’ora? Sei Mwari akavasika?” Mhinduro shoma dzavakandiudza dzakanga dzisina musoro uye hadzina kundigutsa.
Muna 2002, kutenda kwandaiita muna Mwari kwakaparara. Takanga tichangobva kutamira kuGermany, uye pashure pevhiki rimwe chete, baba vangu vakaoma rutivi rwemuviri, vakarwara zvekuda kufa. Ndakanga ndava nemakore ndichinamata kuti vanhu vemumhuri medu vagare vaine utano uye kuti upenyu huvafambire zvakanaka. Zuva nezuva ndaiteterera ndichikumbira Mwari kuti aponese baba vangu, ndiine chokwadi chekuti iye Wemasimbaose ndiye ega ane simba paupenyu nerufu. Nechomumwoyo ndaiti, ‘Mwari haangambotadzi kupindura munamato wekasikanawo zvako kakaita seni.’ Ndaiva nechivimbo chokuti aizopindura zvandaikumbira. Asi baba vangu vakafa zvakadaro.
Izvi zvakandipedza simba nokuti ndainge ndava kuona sokuti Mwari haana basa nevanhu. Nechemumwoyo ndaiti, ‘Zvimwe ndiri kunamata nenzira isiri iyo, kana kuti Mwari haako.’ Ndakapererwa, ndikabva ndasiya zvekupa munamato wenamaz. Hapana chimwe chitendero chandaida, saka ndakazongosara nepfungwa yekuti Mwari haako.
Papfuura mwedzi mitanhatu, Zvapupu zvaJehovha zvakauya pamba pedu. Sezvo taisaremekedza chiKristu, ini nasisi vangu taida kuvaratidza zvakanaka-naka kuti vaidzidzisa zvisirizvo. Takavabvunza kuti: “Sei vaKristu vachinamata Jesu, Mariya, muchinjikwa nezvimwe zvidhori, asi izvo zvisingatenderwi neMirayiro Gumi?” Zvapupu izvi zvakatiratidza zvakajeka zvichishandisa Magwaro kuti vanamati vechokwadi havabvumirwi kunamata zvifananidzo uye kuti Mwari ndiye chete anofanira kunamatwa. Ndakabva ndashaya neromuromo.
Takabva tavabvunza kuti: “Ko dzidziso yeUtatu? Kana Jesu ari Mwari, sei akararama panyika uye sei akaurayiwa nevanhu?” Vakashandisazve Bhaibheri pakutipindura uye vakatsanangura kuti Jesu haasi Mwari uye haana kuenzana naMwari. Zvapupu zvakatsanangurawo kuti izvi ndizvo zvinoita kuti vasatende dzidziso iyi yeUtatu. Zvakandishamisa ndikati nechemumwoyo, ‘VaKristu ava vakasiyana nevandinoziva.’
Asi ndakanga ndichiri kuda kuziva kuti sei vanhu vachifa uye sei Mwari achisiya vanhu vachitambura. Zvapupu izvi zvakandiratidza bhuku rainzi Zivo Inotungamirira Kuupenyu Husingaperi, * iro raiva nezvitsauko zvakapindura mibvunzo yangu. Vakabva vatanga kudzidza neni Bhaibheri.
Pose pataidzidza, ndaiwana mhinduro dzinobva muBhaibheri, dzine musoro dzemibvunzo yandaiva nayo. Ndakaziva zita raMwari rokuti Jehovha. (Pisarema 83:18) Rudo ndirwo chinhu chikuru chinoratidzwa naMwari. (1 Johani 4:8) Akasika vanhu nekuti aida kupawo vamwe chipo cheupenyu. Ndakasvika pakunzwisisa kuti kunyange zvazvo Mwari achibvumira zvakaipa kuti zviitike, haazvide uye pasina nguva achaita kuti zvipere zvachose. Ndakadzidzawo kuti kupanduka kwaAdhamu naEvha ndiko kwakapinza vanhu vose mumatambudziko. (VaRoma 5:12) Matambudziko iwayo anosanganisira kufirwa nevanhu vatinoda, sokufirwa kwandakaitwa nababa vangu. Zvisinei, Mwari achabvisa matambudziko akaita seaya munyika itsva iri kuuya, uye vakafa vachamutswa.—Mabasa 24:15.
Chokwadi chemuBhaibheri chakapedza nyota yezvandaida kuziva. Ndakatangazve kutenda kuti Mwari ariko. Pandaiwedzera kuziva Zvapupu zvaJehovha, ndakaona kuti vakabatana munyika yose. Ndakayemura kubatana uye kudanana kwavanoita. (Johani 13:34, 35) Zvandakadzidza nezvaJehovha zvakaita kuti ndide kumushumira, saka ndakasarudza kuva mumwe weZvapupu zvaJehovha. Ndakabhabhatidzwa musi wa8 January, 2005.
Zvinodzidziswa neBhaibheri zvakavandudza maonero andaiita upenyu. Tsanangudzo dzechokwadi dziri muShoko raMwari dzinoita kuti ndive nepfungwa dzakagadzikana. Ndinofara zvikuru uye ndinonyaradzwa netariro yekuzoona baba vangu zvekare pachamutswa vanhu sezvatinovimbiswa neShoko raMwari.—Johani 5:28, 29.
Iye zvino ndava nemakore matanhatu ndaroorwa nemurume wangu anotya Mwari, Jonathan. Tose takaona kuti chokwadi nezvaMwari chinonzwisisika, uyewo ipfuma inokosha. Izvi ndizvo zvinoita kuti tiudzewo vamwe zvatinotenda uye zvinhu zvakanaka zvatinovimbiswa naMwari. Iye zvino ndava kuziva kuti Zvapupu zvaJehovha havasi vaKristu vasinganzwisisiki, asi ndivo vaKristu vechokwadi.
^ ndima 15 Rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha asi harichadhindwi.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Chokwadi chemuBhaibheri Chakapedza Nyota Yezvandaida Kuziva